ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ လယ်သမားများ၏ ဒုတိယသမ္မတထံ တင်ပြချက်များကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမည်ဟ? - Yangon Media Group
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ လယ်သမားများ၏ ဒုတိယသမ္မတထံ တင်ပြချက်များကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမည်ဟ?
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်သို့ရောက် ရှိခဲ့သည့် ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူထံသို့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မှ လယ်သမားများ တင်ပို့တောင်းဆိုချက်များကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ် ပေးမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ကတိပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းဆည်းခံရသည့် လယ်သမားခေါင်းဆောင်များက ကျောက်ဖြူလေ ဆိပ်ခန်းမတွင် နိုဝင် ဘာ ၄ ရက်က ဒုတိယသမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်မြေများအတွက် လယ်ယာမြေ သစ် ဖော်ထုတ်ပေးရေး ၊ လျော်ကြေးငွေများအဖြစ် လယ်တစ် ဧက ကျပ်သိန်း ၉၀၀၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ တစ်ဧက ကျပ်သိန်း ၇၀၀နှင့် စား ကျက်မြေ တစ်ဧက ကျပ်သိန်း ၅၀၀ စီပေးရေးနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရ မည့် နေအိမ်များကို ရွှေ့ပြောင်း တည်ဆောက် သည့်အခါ အဆင့်အတန်းရှိသည့် နေအိမ်များအဖြစ် ပြန်လည်တည် ဆောက်ပေးရေး စသည့်အချက်များ ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒုတိယသမ္မတကတော့ ကျွန် တော် တင်ပြတောင်းဆိုတာကို ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ ကျွန်တော် တို့ တောင်းဆိုတာကို အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်။ ဘာမှမကြောင့်ကြနဲ့လို့ ပြောသွားပါတယ် ” ဟု ဒုတိယသမ္မတနှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့သည့် လယ်သမားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အ ထည်ဖော် ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနေရာအနီးမှ လယ်မြေဧက ၂၅၀ ကိုလည်း စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ရခိုင်ပြည် နယ် ကျောက် ဖြူမြို့သို့ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က နေ့ချင်းပြန် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယသမ္မတ၏ ကျောက်ဖြူ ခရီးစဉ်အတွင်း မဒဲကျွန်း တရုတ် ရေနံ တင်ဆိပ်ကမ်း အသစ်တည် ဆောက်မည့် ရေနက် ဆိပ်ကမ်းနေ ရာ၊ မလကျွန်းရှိ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင် စက်ရုံနှင့်ှနဇ စီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်မည့် နေရာများကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ငါးပြတိုက်တစ်ခု ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
ယီမင်မှ ပစ်လွှတ်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ကို ဆော်ဒီ ကြားဖြတ် ဟန့်တားခဲ့ရ
ဟင်းတစ်မည်တည်းစားရန်ပြောခြင်းမှာ အလှူများတွင်စား သကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရင်း??
အစိုးရ လိုငွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးထက် ဗဟိုဘဏ်မှ ငွေချေးယူခြင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် ဆောင်
ဆူလီက ပရိသတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဝတ်ပြခဲ့
မန်ယူနည်းပြဟောင်း ဖာဂူဆန်၏ ရောဂါဝေဒနာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ
ထမံသီဘေးမဲ့တောတွင် သုတေသနပြုရန် တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာထောင်ချောက်လေးလုံး ဖျက်ဆီးခံရ